Mgbe Onye Ezinụlọ Gị Na-arịa Ọrịa Ga-egbu Ya
ISIOKWU TETA! A È Nwere Ebe Mmadụ Na-aga Ma Ọ Nwụọ?
ISIOKWU TETA! A Ihe Baịbụl Kwuru Banyere Ndụ na Ọnwụ
Elias Hutter na Ọmarịcha Baịbụl Ndị Ọ Sụgharịrị n’Asụsụ Hibru
Mkpụrụ Akwụkwọ Hibru Kacha Nta Na-eme Ka Obi Sie Anyị Ike
Ikwu na Ụwa Ga-aghọọ Paradaịs, Ọ̀ Bụ Ịmụ Anya Arọ Nrọ Ka Ọ̀ Bụ Eziokwu?
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ụlọ Nche | Nke 4 n'Afọ 2017
E kwesịrị ibido n’oge kwurịta ihe a ga-eme
E NWERE otu nwaanyị aha ya bụ Doreen. Aha di ya bụ Wesley. Wesley dị afọ iri ise na anọ. O juru Doreen anya mgbe ndị dọkịta kwuru na nnukwu akpụ toro di ya n’ụbụrụ. * Ha kwuru na ọ fọrọ ọnwa ole na ole ka ọ nwụọ. Doreen kwuru, sị: “O siiri m ike ikweta ihe a ha kwuru. O nyeghị m ọnụ okwu ruo ọtụtụ izu. Ọ dị m ka ọ̀ bụ onye ọzọ ka ihe a na-eme. Amaghị m na ụdị ihe a ga-eme anyị.”
E nweela ọtụtụ ndị ọ dị otú a ọ dị Doreen mgbe ụdị ihe a mere ha. Mmadụ nwere ike ịmalite ịrịa ọrịa ga-egbu ya mgbe ọ na-atụghị anya ya. Ụdị ihe a mee, ọtụtụ ndị na-ewepụta onwe ha elekọta ndị nke ha a chọpụtara na ha na-arịa ọrịa ga-egbu ha. Ma, ilekọta onye na-arịa ụdị ọrịa a abụghị obere ọrụ. Olee ihe ndị ezinụlọ nke onye na-arịa ụdị ọrịa a nwere ike ime iji kasie ya obi ma lekọta ya nke ọma? Olee ihe onye na-elekọta ya ga-eme ka ihe ndị nwere ike ịna-enye ya nsogbu n’obi n’oge ahụ ọ na-elekọta onye ahụ ghara ịna-akpa ya aka ọjọọ? Ka oge onye ọrịa ahụ ga-anwụ na-eru nso, olee ihe ndị e nwere ike ịtụ anya ga-eme ya? Tupu anyị azaa ajụjụ ndị a, ka anyị bugodị ụzọ leba anya n’ihe mere na ilekọta onye na-arịa ọrịa ga-egbu ya abụghị obere ọrụ taa.
IHE MERE NA Ọ BỤGHỊ OBERE ỌRỤ TAA
Ndị dọkịta emeela ka ndị mmadụ ghara ịna-anwụ ngwa ngwa otú ha sibu anwụ ma ha rịawa ọrịa. Ihe dị ka otu narị afọ gara aga, ndị mmadụ na-anwụchu ọnwụ ma n’obodo ndị mepere emepe ma ndị nke na-emepeghị emepe. Ndị mmadụ na-anwụ ngwa ngwa n’ihi ọrịa na-efe efe ma ọ bụ ihe mberede. N’oge ahụ, e nwechaghị ụlọ ọgwụ, a na-anọ n’ụlọ elekọta ndị ọrịa, ha na-anọkwa n’ụlọ anwụ.
Ọtụtụ ọgwụ ndị e nwere taa na ụzọ dị iche iche e si agwọ ọrịa na-enyere ndị dọkịta aka ime ka ọrịa ụfọdụ ghara igbu mmadụ ngwa ngwa. Ọrịa ndị nwere ike igbu mmadụ ozugbo n’oge ochie anaghịzi egbu mmadụ otú ahụ taa. Ma, na e mere ka ọrịa ghara igbu mmadụ ngwa ngwa apụtaghị na ọ na-eme ka onye ahụ gbakee. Ọrịa nwere ike ịkpa mmadụ aka ọjọọ nke na ọ gaghị elekọtali onwe ya. Ilekọta ụdị onye a abụghị obere ọrụ.
Ma, ọtụtụ ndị na-anọzi n’ụlọ ọgwụ anwụ karịa mgbe mbụ. Ọtụtụ ndị taa amaghị ihe ndị na-eme mmadụ ma ọ chọwa ịnwụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole hụtụrụla mmadụ ka ọ na-anwụ. Ịtụ ụjọ ihe ndị nwere ike ime, nwere ike ime ka mmadụ ghara ịmazi ihe ọ ga-eme ka o nyere onye ezinụlọ ya na-arịa ọrịa aka. Olee ihe nwere ike inyere ya aka?
BIDONỤ N’OGE KWURỊTA IHE UNU GA-EME
Ihe ahụ mere Doreen gosiri na obi na-agbawa ọtụtụ ndị ma a gwa ha na onye nke ha na-arịa ọrịa ga-egbu ya. N’agbanyeghị otú ọ bụla obi dị gị, olee ihe ga-enyere gị aka ịma ihe ị ga-eme? Otu nwoke fere Jehova n’oge ochie rịọrọ ya, sị: “Kụziere anyị otú anyị ga-esi na-agụ ụbọchị anyị ka anyị wee nweta obi amamihe.” (Abụ Ọma 90:12) Rịọsie Jehova Chineke arịrịọ ike ka ọ kụziere gị otú ‘ị ga-esi na-agụ ụbọchị gị’ ka gị na onye nke gị ahụ na-arịa ọrịa nwee ike ibi nke ọma tupu ya anwụọ.
Ihe a ga-achọ ka unu hazie ihe nke ọma. Ọ bụrụ na onye nke gị ahụ ka na-ekwu okwu, dịkwa njikere ikwu ihe a ga-eme, ọ ga-adị mma ka unu jụọ ya onye ọ chọrọ ka o kwuchite ọnụ ya mgbe ọ na-agaghị ekwuli okwu. E kwesịrị iso ya kwurịta ma ọ̀ ga-achọ ka ọ nọrọ n’ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ka a kwụnye ya ọksijin ma ọ bụkwanụ si n’ụzọ ndị ọzọ mee ka ọ nọtụkwuo ndụ. Ibu ụzọ kwurịta ihe ndị a ga-eme ka unu ghara ise okwu mgbe unu ga-ekpebi otú a ga-esi agwọ ya mgbe ọ na-enweghịzi ike ikwu okwu. Ọ ga-emekwa ka obi ghara ịma unu ikpe ma unu kpebichaa ihe unu ga-eme. Ọ bụrụ na unu ebido n’oge kwurịta ihe unu ga-eme, ọ ga-eme ka unu lekwasị anya n’ilekọta onye ahụ na-arịa ọrịa. Baịbụl kwuru, sị: “Atụmatụ na-aghasasị ma ọ bụrụ na a gbaghị izu.”​—⁠Ilu 15:⁠22.
OTÚ E NWERE IKE ISI NYERE ONYE AHỤ AKA
Ọrụ kacha mkpa onye na-elekọta onye ọrịa kwesịrị ịrụ bụ ịkasi ya obi. E kwesịrị ime ka onye nọ n’ọnụ ọnwụ mata na a hụrụ ya n’anya nakwa na a gaghị ahapụ ya. Olee otú e nwere ike isi eme ya? Na-abụrụ ya abụ ma ọ bụkwanụ na-agụrụ ya akwụkwọ ndị ga-atọ ya ụtọ, nakwa ndị ga-eme ka obi sie ya ike. Ahụ́ na-eru onye na-arịa ọrịa ala ma onye ezinụlọ ya jide ya aka ma meda obi na-agwa ya okwu.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ abịa ileta ya, e kwesịrị ime ka ọ mata ndị ahụ bịaranụ. Otu akwụkwọ kwuru, sị: “A bịa n’ihe gbasara ịnụ ihe, ibitụ ihe aka, ịnụ ìsì, imetụ ihe aka na ịnụ ụtọ ihe, nke ikpeazụ mmadụ na-akwụsị ime tupu ya anwụọ bụ ịnụ ihe. Onye ahụ nwere ike ịna-anụ ihe n’agbanyeghị na o nwere ike ịdị ka ọ̀ nọ n’ụra. N’ihi ya, anọla ebe ahụ ekwu ihe ọ bụla ị ma na ị gaghị ekwuli mgbe ọ mụ anya.”
O kwe mee, kpeere ya ekpere. Baịbụl kwuru na e nwere mgbe Pọl onyeozi na ndị ya na ya so nọ n’ezigbo nsogbu nke na ha amaghị ma hà ga-adị ndụ. Olee otú ha si chọọ ka ndị ọzọ nyere ha aka? Pọl gwara ụmụnna ya, sị: “Unu pụkwara inye aka site n’ịrịọsi arịrịọ ike n’ihi anyị.” (2 Ndị Kọrịnt 1:​8-11) Ekpere anyị ji obi anyị niile kpeere onye nọ ná ezigbo nsogbu ma ọ bụ onye na-arịa ọrịa, na-abara ya ezigbo uru.
NA-ATỤNỤ ANYA IHE NWERE IKE IME
E nweghị onye obi na-adị ụtọ na onye nke ya na-aga ịnwụ. Ihe a gosiri na e keghị anyị ka anyị na-anwụ anwụ. Chineke ekeghị anyị ka anyị lewa ọnwụ anya ka ihe kwesịrị ekwesị. (Ndị Rom 5:12) Ọ bụ ya mere Baịbụl ji kpọọ ọnwụ “onye iro.” (1 Ndị Kọrịnt 15:26) N’ihi ya, ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ọ na-esiri mmadụ ike ikweta na onye ezinụlọ ya na-arịa ọrịa ga-anwụ.
Ma, ọ bụrụ na ndị ezinụlọ onye ahụ ana-atụ anya ihe nwere ike ime, ọ ga-eme ka obi sie ha ike, meekwa ka ha na-akasi onwe ha obi. E dere ụfọdụ ihe nwere ike ime mmadụ tupu ya anwụọ n’igbe isiokwu ya bụ, “ Ihe Ndị Nwere Ike Ime Onye Ọrịa n’Izu Ole na Ole Tupu Ya Anwụọ.” Ma, ọ bụghị onye ọ bụla ka ihe niile e kwuru ebe ahụ na-eme, ọ bụghịkwa iwu na ha niile ga-eme otú ahụ e si depụta ha. Ma, ụfọdụ n’ime ha na-eme ọtụtụ ndị ọrịa tupu ha anwụọ.
Ọ bụrụ na onye ezinụlọ anyị ahụ anwụọ, anyị nwere ike ịgwa enyi anyị chọrọ inyere anyị aka ka ọ bịa nye aka. E kwesịrị ime ka ndị ezinụlọ onye ahụ nwụrụnụ ma ọ bụ ndị lekọtara ya mata na nsogbu ya ebiela, nakwa na o nweghị ebe ọ nọ na-ata ahụhụ. Onye kere anyị gwara anyị na “ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị.”​—⁠Ekliziastis 9:⁠5.
ONYE KACHA ELEKỌTA ANYỊ
Anyị ekwesịghị igbochi onye ọ bụla inyere anyị aka
Anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ma mgbe onye ezinụlọ anyị nọ n’ọrịa ma mgbe anyị na-eru uju ọnwụ ya. Chineke nwere ike ime ka ndị ọzọ nyere anyị aka ma ọ bụ gwa anyị okwu ga-akasi anyị obi. Doreen ahụ e kwuru banyere ya ná mmalite isiokwu a kwuru, sị: “Amụtara m na ekwesịghị m igbochi onye ọ bụla inyere m aka. Otú ọtụtụ ndị si gbatara mụ na di m ọsọ enyemaka juru anyị anya. O doro anyị anya na ọ bụ Jehova mere ka ndị mmadụ bịa nyere anyị aka. Anyị nwere ike ikwu na ọ bụ otú a ka Jehova ji agwa anyị, sị ‘Anọ m ya, inyere unu aka.’ Agaghị m echefu ihe a echefu.”
N’eziokwu, ọ bụ Jehova Chineke kacha elekọta anyị. Ọ bụ ya kere anyị, ọ makwa nsogbu ndị anyị na ha na-alụ na otú ha si ewute anyị. Ọ chọsiri ike inyere anyị aka ka anyị nwee ike idi ha. Ọ ga-emelikwa ya. O kwekwara anyị nkwa na n’oge na-adịghị anya, na ya ga-akpọlite ọtụtụ ijeri ndị nwụrụ anwụ. (Jọn 5:​28, 29; Mkpughe 21:​3, 4) Mgbe ọ ga-eme ya, anyị niile ga-ekwu ihe a Pọl onyeozi kwuru. Ọ sịrị: “Ọnwụ, olee mmeri gị? Ọnwụ, olee ebe ihe i ji agba mmadụ dị?”​—⁠1 Ndị Kọrịnt 15:55.
^ para. 2 Aha a kpọrọ ha n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
IHE NDỊ NWERE IKE IME ONYE ỌRỊA N’IZU OLE NA OLE TUPU YA ANWỤỌ
Ụfọdụ ihe ndị e kwuru n’okpuru ebe a nwere ike ime onye ọrịa n’izu ole na ole tupu ya anwụọ. E nwekwara onye ha niile nwere ike ime. *:
Enwechaghị mmasị iri ihe oriri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Iji ihe dị ka mmiri ọgwụ ehicha onye ahụ ọnụ na ịtụkwasị ya ákwà dị mmiri mmiri n’egedege ihu ya ga-enyere onye ahụ aka.
Ịchọ ka naanị ya ma ọ bụ ya na mmadụ ole na ole na-anọ. Ekwela ka a na-eme mkpọtụ ebe ahụ.
Ihi oké ụra.
Ahụ́ ịgba ghara ghara. Mgbe ahụ́ na-agba ya ghara ghara, a gwala ya nọrọ nwayọọ, kama, meda obi gwa ya okwu ga-eme ka obi ruo ya ala.
Uche akpakọghịkwa ọnụ. Ị gaa ileta onye ahụ, gwa ya aha gị. Geekwa ya ntị nke ọma, ọ bụrụgodị na o yiri ka ọ machaghị ihe ọ na-ekwu.
Mmadụ ịbagide onwe ya nsị na mamịrị. Gbalịa na-asa ya ahụ́, na-emekwa ka ihe ndina ya na-adị ọcha.
Otú o si eku ume na-agbanwe. Onye ahụ nwere ike ya na-eku ume, ya ana-asụ ude. Ihe nwere ike ịkpata ya bụ na onye ahụ anaghịzi eku ume nke ọma.
Imi mkpọchi. E nwere ike iji pilo hilie onye ahụ isi ka o nwee ike ịna-eku ume nke ọma.
Ụcha akpụkpọ ahụ́ ịgbanwe. Ihe na-akpatakarị ya bụ na ahụ́ onye ahụ na-emezi ka ọbara na-aga n’akụkụ ahụ́ ndị dị mkpa ka ha nwee ike na-arụ ọrụ nke ọma.
^ para. 26 Ebe e si nweta ihe ndị e kwuru ebe a: The Metropolitan Hospice of Greater New York
Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?
Baịbụl kwuru ụzọ ihe atọ mere ndị mmadụ ji ata ahụhụ.
Nke 4 n'Afọ 2017 | Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ndụ na Ọnwụ?
ỤLỌ NCHE Nke 4 n'Afọ 2017 | Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ndụ na Ọnwụ?
Otú Ị Ga-esi Die Ọnwụ Di Gị ma Ọ Bụ Ọnwụ Nwunye Gị